Gbasara Anyị | Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu na Office PC Ngwa Brand
Shenzhen Nzukọ Tech Co. Ltd.
Mee ka mmadụ niile nwee ọ ofụ egwuregwu.
MeeTion ika, nke eweputara na Eprel 2013, bu ulo oru nke puru iche na igodo ihe eji eme elu, umu oke egwu, na ngwa ndi ozo maka E-Sport.
"Mee ka mmadụ niile nwee obi ụtọ na egwuregwu" bụ ọhụụ nke MeeTion. anọwo na-arụsi ọrụ ike iji nyere ndị na-egwu egwuregwu aka gburugburu ụwa iji melite kiiboodu egwuregwu na ahụmịhe. Anyị eguzobewo ndị otu na-ekwenye ekwenye na mpaghara dị iche iche ma mekwa ka ngwaahịa anyị dị omimi mebe MeeTion Product na mpaghara.
Anyị na-enwe mmekọrịta anyị na ndị egwuregwu egwuregwu sitere na mpaghara ụwa dị iche iche. Ahụmahụ ndị ọrụ na mkpesa banyere ntụpọ ngwaahịa bụ nghazi anyị maka ịmepụta ngwaahịa ọhụrụ. Anyị na-achọkwa mgbe niile ụzọ ọhụụ iji mepụta ma tinye teknụzụ na ngwa ọhụụ ndị ọzọ na ngwaahịa anyị iji mee ka ndị ọrụ anyị nweta ahụmịhe ọhụụ nke teknụzụ na ihe ọhụụ wetara ngwa ngwa.
Kemgbe ntọala ya, MeeTion Tech agbagidewo mmụba ịtụnanya na ụlọ ọrụ ahụ. MeeTion Tech rere 2.22 nde keyboards na oke na 2016, nde 5.6 na keyboards na oke na 2017, na 8.36 nde keyboards na oke na 2019.
Akara MeeTion sitere na "Xunzi · Emperors": ndị ọrụ ugbo siri ike mana ha pere mpe. Mgbe ahụ, site na iji ọnọdụ ihu igwe, ala, na ọnọdụ ụmụ mmadụ, ha nwere ike ime ihe niile. Echiche ya bụ inye oke egwu maka ọnọdụ ihu igwe, ala, na ọnọdụ mmadụ iji wuo echiche a na-emeghe, nke gụnyere, na-ekwenye ekwenye na mmeri. Na Machị 15, 2016, MeeTion mere nkwalite nke ọma na gburugburu ebe obibi, si otu a na-akwalite iwu e-yinye n'egwuregwu E-egwuregwu yana ndị mmekọ na ụlọ ọrụ ahụ.
Anyị na-kwara na-amị nke kacha mma mma ngwaahịa na ndị kasị asọmpi ahịa. Ya mere, anyị ji obi anyị niile na-akpọ ụlọ ọrụ niile nwere mmasị ka kpọtụrụ anyị maka ịmatakwu ihe ọmụma.
Okwu: Building 2, Hengchangrong High-tech Park, Huangtian, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China.